शनिबार, मे 26, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
मेरो मुख्य शौक हुर्कदै, जब म समस्यामा पर्दै थिइन, ड्रइ was गर्दै थियो। मैले हाई स्कूलमा हुँदा केहि बर्ष ड्राफ्टिंग कोर्सहरू पनि लिएँ र यसलाई मन पराए। यसले वर्णन गर्दछ कि मँ प्राय: ग्राफिक्स, इलस्ट्रेटर, चित्रण र अन्य डिजाइन शीर्षकहरूमा लेख वा पोष्टहरू किन गर्दछ।
यद्यपि म आफै उत्पादन गर्न वा महान डिजाइनहरू सिर्जना गर्न सक्षम छैन, म विश्वास गर्दछु कि म यसको लागि एक स्वाद छ। म digress! यहाँ टाइपोग्राफीमा एक कूल सानो भिडियो छ ... धेरै मानिसहरूलाई फन्ट डिजाइनमा जान सक्ने सबै कार्यहरू थाहा हुँदैन र फन्टहरूले तपाईंको सन्देशमा फन्टहरू खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका।
एउटा नोट: यो फन्टको सबै गुणहरू वर्णन गर्न एक महान भिडियो हो, तर मलाई भिडियोमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने फन्टहरू मनपर्दैन। जसरी भए पनि तपाईंसँग यो साझेदारी गर्न चाहन्छ! त्यस तरीकाले जब तपाइँ तपाइँको डिजाइनरलाई वर्णन गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँ अक्षरहरू बीच अधिक ठाउँ चाहानुहुन्छ, तपाइँ तिनीहरूको भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्छ, "के हामी कर्निंगलाई बढाउन कोशिस गर्न सक्छौं?"
टाइपोग्राफी को विशेषताहरु को केहि शाब्दिक:
लाइन लम्बाई - सुरुमा फर्कनु अघि कति अक्षरहरू रेखामा फिट हुन्छन्।
प्रमुख अर्कोमा पाठको रेखाको आधार रेखा बीचको दूरी।
कर्निंग गर्दै - एक शब्दमा अक्षरहरू बीच दूरी।
स्टेम - चरित्रको 'लगाइएको' भाग जुन बाँकी अक्षरबाट लेखिएको हो।
बेसलाइन - अक्षरहरूको आधारको तेर्सो पign्क्तिबद्धता।
एसेन्डर - फन्टको एक अंश जुन चरित्रको उचाई भन्दा माथि चढ्दछ।
डिसेन्डर - फन्टको अंश जुन आधारभूत रेखा भन्दा पर जान्छ।
काउन्टर - सेतो खाली ठाउँ लेटरफार्म द्वारा संलग्न।
सेरिफ - वर्णको प्रत्येक टर्मिनेसनको डिजाईन (सेन्स सेरिफको मतलब डिजाइन हुँदैन)
x- उचाई - एक विशिष्ट चरित्र को उचाई (कुनै आरोही वा डाउनराइड बाहेक)
त्यहाँका पेशागत व्यक्तिहरूलाई मेरो माफी चाहन्छु जसले बाँच्नको लागि त्यसो गर्छन्। म भर्खर औसत मार्केटरलाई फन्ट र टाइपोग्राफीमा प्राइमर दिन चाहान्छु। तपाईको सल्लाह र मेरो सरल वर्णनमा सुधारको साथ डायल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
मई 27, 2007 मा 2: 24 PM
शुरुआतीहरूको लागि राम्रो परिचय। परिभाषा तपाईंले "काउन्टर" को लागी प्रयोग गर्नु भएको छ, अलिकति भ्रामक हुन सक्छ। मैले सुनेको सब भन्दा राम्रो छोटो परिभाषा हो "सेटर स्पेस लेटरफॉर्म द्वारा घेरिएको?"
मई 27, 2007 मा 2: 32 PM
धन्यवाद केविन! मैले तपाईंको सिफारिशको साथ संक्षिप्त परिभाषा अपडेट गरें।
मई 28, 2007 मा 11: 35 एएम
हे मेरो गफ! मलाई कुनै विचार थिएन यति धेरै फन्ट डिजाइन गर्न गए। मलाई वास्तवमै माइक्रोसफ्टले अफिस २०० uses मा प्रयोग गरेको नयाँ फन्ट मनपर्दछ। मैले यसलाई केहि समयको लागि प्रयोग गरें, र त्यसपछि Office 2007 मा बाउन्स गरियो र म यसलाई खडा गर्न सक्दिन!
वेब होस्टिंग रेवी
जुन २,, २०१ बिहान :11:२२ बिहान
हो, म Thore सँग सहमत छु, मैले सोचे कि यो सरल थियो। मलाई थाहा थिएन यो यति धेरै काम थियो। म अनुमान गर्दछु कि ती मध्ये एउटा मात्र चीज हो जुन हामी सबैले स्वीकार्य रूपमा लिन्छौं। जानकारी को लागी धन्यबाद।
अर्को पटक म फन्ट स्थापना गर्दछु म एक क्षण लिने कुरामा निश्चित छु र कार्य सिर्जना गर्नेमा सराहना गर्दछु।